အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများကို အမျိုးသားအဆင့်တိုင်ကြားမှုယန္တရားဖြင့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားမည် ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(ILO)သို့ ၁၈-၅-၁၉၄၈ ရက် နေ့တွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၂၉ ကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ILO နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ နောက်ဆက်တွဲ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (Supple mentary Under standing-SU)အရ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ILO နှင့် ပူးပေါင်းကာ တိုင်ကြားမှု ယန္တရားထူထောင်ပြီး အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားချက်များကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားချက်များကို နိုင်ငံပိုင်ယန္တရားဖြင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရား (National Complaints Mechanism- NCM) ထူထောင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ဆဲကာလတွင် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်များကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအပါ အဝင်သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများမှကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်သမား ရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (High Level Working Group-HLWG) မှ ကြားကာလယန္တရားအဖြစ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ အမျိုးသားအဆင့်အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုယန္တရားကို စတင်လည်ပတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်၍ မည်သူမဆို အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုများကို လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ ILO(ရန်ကုန်) နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့်လည်းကောင်း၊ အလုပ် သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော်သို့ လူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) စာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၄၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၂၉၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၇၄ နှင့် email လိပ်စာ mol@mptmail. net.mm, molipoffice@ gmail.com, research. org.dol. mm@gmail.com များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ရုံးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရားနှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားကြောင်း သိရှိရသည်။